မမြှျောလငျ့ဘဲ ၂ နှဈနီးပါး ပြောကျဆုံးနတေဲ့ဖခငျကို Tik Tok ကနေ ပွနျလညျရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့တဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံသား။ – SoShwe
Home/LifeStyle/မမြှျောလငျ့ဘဲ ၂ နှဈနီးပါး ပြောကျဆုံးနတေဲ့ဖခငျကို Tik Tok ကနေ ပွနျလညျရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့တဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံသား။
မမြှျောလငျ့ဘဲ ၂ နှဈနီးပါး ပြောကျဆုံးနတေဲ့ဖခငျကို Tik Tok ကနေ ပွနျလညျရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့တဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံသား။
So Shwe February 16, 2022	LifeStyle Leaveacomment
COVID-19 ရောဂါပြံ့ပှါးမှုကို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့အတှကျ အိမျအတှငျးမှာပဲနခေဲ့ရတဲ့အခြိနျမြိုးမှာ ဆငျးရဲခြို့တဲ့ပွီး တဈနလေု့ပျမှ တဈနစေ့ားရတဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံသားတှဟောဆိုရငျ စားဝတျနရေေးအတှကျ အခကျအခဲတှေ ကွုံတှနေ့ရေပါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံ Ludhiana ဒသေမှာ တာဝနျကနြတေဲ့ Punjab လူမြိုးဖွဈတဲ့ Ajaib Singh ဆိုသူ ရဲအရာရှိတဈဦးဟာ အသကျရှငျနထေိုငျဖို့ လိုအပျတဲ့ အစားအသောကျတှေ ဝယျယူနိုငျဖို့အတှကျ ငှကွေေးအခကျအခဲ ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ Ludhiana ဒသေခံတှကေို သူတတျနိုငျတဲ့ ငှကွေေးပမာဏအသုံးပွုပွီး အစားအသောကျတှေ လှူဒါနျးပေးလရှေိ့ပါတယျ။
ရဲအရာရှိက အလှူအတနျးတှပွေုလုပျတဲ့အခါမှာလညျး ဆငျးရဲနှမျးပါးတဲ့ လူတနျးစားတှရေဲ့ သနားစရာဘဝကို မွငျသာအောငျဖျောပွထားပွီး အခွားသော ငှကွေေးခမျြးသာတဲ့သူတှကေ အဆိုပါလူတနျးစားတှရေဲ့ဘဝကို စာနာပွီး အလှူအဒါနျးတှေ ပွုလုပျလိုစိတျရှိလာအောငျ နှိုးဆျောထားတဲ့ ဗီဒီယိုတှေ မှတျတမျးတငျရိုကျကူးပွီး ကွညျ့ရှုသူ ၈ သိနျးကြျောရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ TikTok အကောငျ့မှာ တငျလရှေိ့ပါတယျ။
ရဲအရာရှိ Ajaib Singh တဈယောကျ ၂၀၂၁ ခုနှဈ ၊ မတျလမှာပွုလုပျခဲ့တဲ့ အလှူအတနျးအကွောငျးကို မှတျတမျးတငျရိုကျကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုတဈခုမှာ မိသားစုတဈစုမှ ပြောကျဆုံးသှားတဲ့ မိသားစုဝငျတဈဦး ပါဝငျနခေဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါဗီဒီယိုထဲမှာ အမြိုးသားတဈဦးက သူ့သူငယျခငျြးရဲ့ ဖခငျဖွဈသူ Mr Venkateshwarlu ကို တှရှေိ့ခဲ့ပွီးနောကျ သူငယျခငျြးဖွဈသူကို ဆကျသှယျခဲ့ကာ Ludhiana ဒသေ ရဲဝနျထမျးတှရေဲ့ အကူအညီနဲ့ Mr Venkateshwarlu ကို ပွနျလညျရှာတှခေဲ့ပွီး သူ့ရဲ့မိသားစုဝငျတှနေဲ့ ပွနျလညျဆုံတှစေ့ခေဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံ Telangana ဒသေတောငျပိုငျးက ရှာတဈရှာမှာနထေိုငျတဲ့ Mr Venkateshwarlu ဆိုသူဟာ တဈခွားရှာတဈရှာကို အလုပျကိစ်စအတှကျ သှားလာနတေဲ့အခြိနျမှာ လမျးပြောကျခဲ့ပါတယျ။ မိသားစုရှိရာအရပျကို ပွနျဖို့ကွိုးစားနတေဲ့အခြိနျမှာ ကပျရောဂါဆိုးကွီးကွောငျ့ တဈနရောကနေ နောကျတဈနရောကို ကူးသနျးသှားလာခှငျ့မရှိတော့တာကွောငျ့ Mr Venkateshwarlu ဟာ မိသားစုနထေိုငျရာရှာနဲ့ မိုငျပေါငျး ၁ ထောငျကြျောဝေးတဲ့ ဒသေတဈခုမှာ တဈယောကျတညျး ရှငျသနျနခေဲ့ရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး ဘုရားသခငျက Mr Venkateshwarlu ကို မကျြနှာသာပေးတဲ့အနနေဲ့ တနျဖိုးထားခဈြခငျတဲ့ မိသားစုဝငျတှရေဲ့ ဆုတောငျးတှကေို လဈလြူမရှုဘဲ ရဲအရာရှိ Ajaib Singh ကို အကွောငျးခံကာ သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ ပွညျလညျပေါငျးစညျးခှငျ့ပေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ “Miracles happens everyday” ဆိုတဲ့ စကားစုလေးအတိုငျးပဲ နစေ့ဉျနတေို့ငျးမှာ မထငျမှတျထားတဲ့ ကောငျးခွငျးတှကေိုကွုံတှရေ့နိုငျတာမို့ Soshwe စာဖတျပရိသတျကွီးကလညျး မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ရညျမှနျးခကျြတှကေို လှယျလှယျနဲ့ လကျမလြှော့လိုကျပါနဲ့နျော . . .
မမျှော်လင့်ဘဲ ၂ နှစ်နီးပါး ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဖခင်ကို Tik Tok ကနေ ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား။
COVID-19 ရောဂါပျံ့ပွါးမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အိမ်အတွင်းမှာပဲနေခဲ့ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဆင်းရဲချို့တဲ့ပြီး တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဟာဆိုရင် စားဝတ်နေရေးအတွက် အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ Ludhiana ဒေသမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ Punjab လူမျိုးဖြစ်တဲ့ Ajaib Singh ဆိုသူ ရဲအရာရှိတစ်ဦးဟာ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အစားအသောက်တွေ ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် ငွေကြေးအခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ Ludhiana ဒေသခံတွေကို သူတတ်နိုင်တဲ့ ငွေကြေးပမာဏအသုံးပြုပြီး အစားအသောက်တွေ လှူဒါန်းပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ရဲအရာရှိက အလှူအတန်းတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ လူတန်းစားတွေရဲ့ သနားစရာဘဝကို မြင်သာအောင်ဖော်ပြထားပြီး အခြားသော ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့သူတွေက အဆိုပါလူတန်းစားတွေရဲ့ဘဝကို စာနာပြီး အလှူအဒါန်းတွေ ပြုလုပ်လိုစိတ်ရှိလာအောင် နှိုးဆော်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေ မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးပြီး ကြည့်ရှုသူ ၈ သိန်းကျော်ရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ TikTok အကောင့်မှာ တင်လေ့ရှိပါတယ်။
ရဲအရာရှိ Ajaib Singh တစ်ယောက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ မတ်လမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အလှူအတန်းအကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ မိသားစုတစ်စုမှ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ဦး ပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဗီဒီယိုထဲမှာ အမျိုးသားတစ်ဦးက သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ Mr Venkateshwarlu ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူကို ဆက်သွယ်ခဲ့ကာ Ludhiana ဒေသ ရဲဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ Mr Venkateshwarlu ကို ပြန်လည်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ Telangana ဒေသတောင်ပိုင်းက ရွာတစ်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့ Mr Venkateshwarlu ဆိုသူဟာ တစ်ခြားရွာတစ်ရွာကို အလုပ်ကိစ္စအတွက် သွားလာနေတဲ့အချိန်မှာ လမ်းပျောက်ခဲ့ပါတယ်။ မိသားစုရှိရာအရပ်ကို ပြန်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကြောင့် တစ်နေရာကနေ နောက်တစ်နေရာကို ကူးသန်းသွားလာခွင့်မရှိတော့တာကြောင့် Mr Venkateshwarlu ဟာ မိသားစုနေထိုင်ရာရွာနဲ့ မိုင်ပေါင်း ၁ ထောင်ကျော်ဝေးတဲ့ ဒေသတစ်ခုမှာ တစ်ယောက်တည်း ရှင်သန်နေခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဘုရားသခင်က Mr Venkateshwarlu ကို မျက်နှာသာပေးတဲ့အနေနဲ့ တန်ဖိုးထားချစ်ခင်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ဆုတောင်းတွေကို လစ်လျူမရှုဘဲ ရဲအရာရှိ Ajaib Singh ကို အကြောင်းခံကာ သူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ ပြည်လည်ပေါင်းစည်းခွင့်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ “Miracles happens everyday” ဆိုတဲ့ စကားစုလေးအတိုင်းပဲ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကောင်းခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရနိုင်တာမို့ Soshwe စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကလည်း မျှော်လင့်ချက်တွေ ရည်မှန်းချက်တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ လက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့နော် . . .
Previous စာသငျခနျးတှငျးသငျကွားရေးစနဈကို မယှဉျပွိုငျနိုငျသေးသညျ့ အှနျလိုငျးသငျကွားရေးစနဈမြား။
Next စငျကာပူနိုငျငံနှငျ့ ဘဏျလုပျငနျးအခွအေနေ။